Dingana 10 hananganana paikady Twitter B2B tsara kokoa | Martech Zone
Zoma, Jolay 8, 2011 Zoma, Jolay 8, 2011 Douglas Karr
Vao tsy ela akory izay no namakiako fa ny Twitter dia mbola manana mpampiasa avo roa heny noho ny LinkedIn. Miaraka amin'ny habetsaky ny fampiharana Twitter sy ny fampidirana azy, ny fahatsoran'ny fanamafisana ireo bitsika dia lehibe kokoa ihany koa. Amin'ny maha mpampiasa Twitter B2B ahy manokana, miasa hatrany ny paikadiko Twitter hanohizako amin'ny fananganana mpanaraka sy hisarihana ny mpihaino mahaliana indrindra. Ireto misy paikady aparitako:
Fantaro mpihaino kendrena manaraka. Tontosaiko ireo fomba roa samy hafa… voalohany amin'ny fikarohana ny angon-drakitra momba ny teny lakile izay misy ifandraisany amin'ny mpihaino ahy ary faharoa, amin'ny fanarahana ireo mpanaraka an'ireo ao amin'ilay orinasa mitovy amiko. Ireo fomba roa ireo dia mora amin'ny fampiasana fitaovana toy ny TweetAdder. Raha ny marina dia mbola tsy nahita fitaovana tsara kokoa ho azy aho! (Eny, rohy fampidirana izany).
Raha tokony handefa fanontaniana ankapobeny amin'ny mpanaraka ahy aho dia mametraha fanontaniana mivantana amin'ireo olona tiako harahina na te hanangana fifandraisana. Ny kaonty sasany dia tsy mpihaino ahy, fa manana fahefana amin'ny indostria izy ireo ary mampifandray azy ireo aho. Raha mendrika aho dia hiresaka izy ireo ary hampiroborobo ahy mihitsy… izay manome fahefana sy manangana ny mpanaraka ahy.
Mampiasa aho fanaraha-maso ny media sosialy mamantatra ireo fotoana mety hanampiana ny hafa. Rehefa manampy ny hafa ianao dia matetika no miteraka fananganana fifandraisana ara-barotra izay mety hitarika any amin'ny fidirana an-trano. Aza mieritreritra azy ho manampy olona maimaimpoana… Amin'ny fanampiana ampahibemaso ny hafa amin'ny sehatry ny fahaizanao, izao tontolo izao dia mijery anao manampy ny hafa. Rehefa mahita anao manampy anao izy ireo dia hahatadidy… ary hiantso anao rehefa mila fanampiana izy ireo.
Mampiasa aho Fampiharana Twitter hanampy amin'ny fitantanana ny fikarohana, fanarahana, sioka ary fanafohezana rohy. Twitter.com, ilay tranonkala, mahatsiravina noho izany. Fa ny fampiharana toa ny TweetDeck, Seesmic ary Hootsuite dia mahafinaritra. Mamela anao hitantana tsara kokoa ny resaka izy ireo.
I mandoa vola hampiroborobo ny mombamomba ahy amin'ny tranonkala toy ny TwitterCounter. Toa izay mividy mpanaraka, izay fomba fiasa mahatsiravina izay miteraka mpanaraka spammy an-taonany maro izay miala andro vitsy taty aoriana, ireo tranonkala toa ny TwitterCounter dia manintona mpampiasa matotra izay hifandray amiko raha hitan'izy ireo fa misy ifandraisany amiko.
Matetika aho mandray anjara resaka mampiady hevitra ary miady hevitra am-panajana ny fanoherana ahy. Samy tia ady hevitra tsara ny tsirairay… indrindra amin'ny lohahevitra tena mampihetsi-po. Raha tokony hiahiahy momba ny manafintohina olona aho dia mijery azy toy ny fanivanana ireo olona izay mety tsy te hanao raharaham-barotra mihitsy! Aza matahotra miditra amin'ny tsy fitovian-kevitra fa ataovy am-panajana fotsiny (na ratsy na ratsy toy inona no mahazo azy ireo).
I hampiroborobo… daholo. Na ny fifaninanana ataon'ny mpanjifako sy ny fifaninanana manokana aza dia mahasarika ahy. Ny zava-misy dia namoaka torohevitra sy fampahalalana mahavariana izay mihatra amin'ny mpihaino ahy izy ireo. Amin'ny fizarana izany fampahalalana izany amin'ny mpihaino ahy, ampitomboiko ny lanjan'ilay fandefasana mailaka amin'ny mpanaraka ahy… tsy zavatra ratsy velively.
Miezaka aho aza miresaka momba ny tenako mihitsy. Tsy misy miraharaha anao sy izay ataonao. Miahy ny lanja omenao azy ireo izy ireo. Raha handeha ivelan'ny fotoana fohy aho dia azoko lazaina amin'ny olona ny antony. Raha handeha amina hetsika iray mety ho malaza aho dia azoko atao ny mibitsika azy… fa izany mba hihaonako amin'ireo mpanaraka ahy. Tsoriko fa noroahiko haingana ireo olona nanambara ny sakafo an-tsakafo maraina, sns. Tsy misy miraharaha… indrindra ireo olona mitady hanangana tambajotran-tserasera sarobidy. Ho an'ny Facebook izany banga izany. 🙂
Ampiasako tenifototra araka izay azo atao. Mampiasa tenifototra mahomby izay tadiavin'ny hafa dia afaka manangana ny isan'ny olona mahita ny atiny ary manangana ny manarakao. Aza atao ambanin-javatra ny herin'ny famantarana #!
Raha tsy manana zavatra tsara alefa amin'ny Tweet aho dia alao ny heck up! Indraindray iray na roa andro dia handalo tsy misy bitsika mendrika avy amiko. Tsy maninona aho amin'izany… ny zavatra farany tiako hatao dia ny mameno ny reniranon'ireo mpanaraka ahy amin'ny atiny tsy misy ilana azy!
Raha manana orinasa ianao dia takatrao fa ny fiandrasana telefaona miantso angamba no fomba haingana indrindra amin'ny fatiantoka. Raha te-ho ao anaty resaka ianao dia mila mavitrika amin'ny fitondrana fiara, mamaly, mitarika ary manao ilay resaka izay mitranga ankehitriny.
Ao amin'ny Twitter ny orinasa. Mikaroka momba anao sy ireo mpifaninana aminao ny orinasa. Mitady vahaolana ny orinasa. Raha tsy eo ianao hanampy azy ireo dia aza manantena azy ireo hitady anao. Mila eo alohan'izy ireo tsy tapaka ianao… miaraka amin'ny valiny mety amin'ny fotoana mety.
Jul 9, 2011 amin'ny 1: 37 AM
inona no tianao hampiasaina hanaraha-maso ireo rohy zarainao amin'ny alàlan'ny Tweet, sa ianao?
Jul 9, 2011 amin'ny 2: 18 AM
Mampiasa Hootsuite na Bit.ly aho amin'ny fampifandraisana. Raha ho an'ny fampielezan-kevitra tena izy dia apetrako eo aminy ny kaody fanaraha-maso ny fampielezan-kevitra mba hahitako ny fitsidihana ao amin'ny Analytics.
10 Jul 2011 amin'ny 5:44 PM
Ho ahy B2B ao amin'ny twitter dia momba ny fananganana fifandraisana 🙂
11 Jul 2011 amin'ny 3:56 PM
Zavatra tsara, Doug. Twitter koa dia toerana tsara hijerena ireo ego maro mialoha ny tenany. Malahelo toy ny olona manaraka aho raha ny amin'ny fisehosehoana amin'ny fahasahiany Twitter. Miaraka amin'ny tena kely sy kely, atiny vaovao nozaraina am-boalohany tao amin'ny Twitter, dia mahita ranomasimbe retweet isika, manondro loharano voalohany ihany. Misy ihany anefa ny fomba roa mahatonga izany mahasoa. Afaka mahatsapa ny olona iray fa ny hetsika famerenam-bola dia varavarankely ahafahana mahatakatra tsara kokoa ny toe-tsain'ilay olona. Azonao atao ihany koa ny mampiasa azy amin'ny fomba mahery vaika amin'ny famakafakana fironana. Ary araka ny fantatrao, misy fampiharana any izay manampy manampy amin'ny fanatanterahana azy roa tena mahomby. Ho ahy anefa, ny Twitter dia teboka fiandohana tena misy ary hitazomana ny fifanakalozan-kevitra misy dikany amin'ireo olona. Ary ity tsapako ity no ilana ny tena lanja. Ohatra, rehefa manao resadresaka amin'ny Twitter ianao dia tsy ho gaga aho mahita azy ireo miitatra amin'ny bilaogin'ny orinasanao, amin'ny pejy Facebook anao, amin'ireo olona manaraka ny Blog Talk Radio. Mahita fikambanana maro be aho izao mieritreritra momba ny Twitter fa misy fantsom-barotra hafa, rehefa tsy nahazo diplaoma akory izy ireo hatramin'ny fampiasana azy io hiresahana tsotra fotsiny amin'ny mpanjifany. Vavao ny fiovana ankehitriny amin'ny mantra an'ny ROI ary tsy azonao atao ny mieritreritra fa ny ankamaroan'ny orinasa dia mbola tsy mahazo ihany. Mitovy amin'ny taloha ihany.
May 10, 2012 ao amin'ny 2: 09 PM
"Mametraka fanontaniana mivantana amin'ny olona tiako harahina aho na te hanorina fifandraisana". Inona ny fanontaniana apetrakao?
May 17, 2012 ao amin'ny 7: 19 PM
@ google-aa522cbe3de1ac803a0cf795b19e8a3a: disqus, ny tiako holazaina amin'izany dia ny fandaniako fotoana hijerena ny mombamomba azy ireo sy ny tranokalan'izy ireo hahitana fanontaniana tsara izay mampiseho fa nahavita ny entimodiko aho. Ao amin'ny Twitter aho dia mahita olona manazava hatrany miaraka amin'ny zavatra toy ny “Lazao amiko izay boky vakianao”…. ary fantatro fa tsy misy liana liana amin'ny zavatra vakiako izy ireo. Fa kosa, tiako ny mamaky kely momba azy ireo ary manontany azy ireo ny fanontaniana iray ihany no azon'izy ireo valiana.
Ohatra, hitako fa miara-miasa amin'ny orinasa ecommerce ianao ary toa miara-miasa amin'i Magento ianao? Manana mpanjifa vitsivitsy izay mampiasa Magento izahay ary matetika mitady loharano indraindray hanampiana - izany ve no karazana asa azonao atao?
14 Mey 2013 tamin'ny 5:11 hariva